Dubartoonni maaliif meeshaa iccitii shororkessummaa ta'u? - BBC News Afaan Oromoo
Shamimaa Begum wayita bara 2015'tti UK dhiifte baatu Landan shamarre waggaa 15 turte.
Oduun waa'ee shororkessuummaa dubartootaan walqabatee yoo dhagahamuutti, gaheen dubartootaa yeroo baayyee akka miidhamtootaa ykn miidhaa qaqabee akka mormaniitti ibsamu.
Faallaa isaatiin ammoo, dubartoonni gocha shororkessummaa keessatti hirmaatan fi gargaaran ni dagatamu.
Erga shamarree Shaamimaa Begum kan akka 'intala postar' IS ibsamte kaampii baqattoota Siriyaa keessatti argamteen booda haalli kunis geedaramaa jira.
Waggoota afuriin dura, hiriiyyoota ishee lama waliin IS tti makamuuf UK gadhiiftee turte. Garuu 'haadha warraa' qofaa akka turte himti.
Barreessaan dhimmoota biyya keessaa UK's ''shororkessummaan yoo kan deebitu ta'ee, balaawwan qabaata'' jechuun lammummaashee haqeera. Murte kana irratti iyyannoo akka dhiyeeffatuuf deegarsa seeraa argattee jirti.
Dubartoota Shororkessummaa keessatti
Dhimmi Ms Begum' kunis dubartoota gareewwan IS fi kan biraa keessatti hirmaataniif gaaffiiwwan baayyee kaasee ture.
Xinxalli Royal United Services Institute (Rusi) akka jedheetti, kadhimamtoonni makaraaressummaa afriikaa keessatti taasisamu %71 dubartoota. Qorannoon gara biraa ammoo hirmaattoonni lammii biyya biraa IS Iraaqii fi Siriyaa keessaa %13 dubartoota jedha. Lakkoofsi sirriin ifaa ta'u baatulleen kana caalu danda'a jedhameera.
Madda suuraa, Met Police
Shamimaa Begum (mirga) hirriyoota ishee lama waliin, Amiraa Abaase fi Kaadizaa Sultaanaa, bara 2015'tti buufta xiyyaaraa Gatwick'tti
Qorannoowwan Rusi'n deeggaraman hedduun gahee dubartoonni dhaabbilee akka IS fi al-shaabaab keessatti bahan olaanaa ta'uu adda baasaniiru.
Qorattoonnis dubartoota kallattii fi al kalattiin sochiilee al-shaabaab keessatti hirmatan dubbisaniiru. Kunis attamiin akka filataman, fi miidhaa gareewwan mankaraarsitoota akkasii keessatti hirmaachuun dubartootaa irratti qabaatu gaafataniiru.
Hojiin kunis Keeniyaa keessatti warra qorattoota akkaadaamii kanneen muuxannoo isaanii dheeraa fi walitti dhufeenya hawaasaa kanneen markaraaresummaan balaaf saaxilamanitti fayyadamaniin gaggeefame.
IS vs al Shaabaab
Gareedhaa gareetti gaheen dubartoonni bahan adda.
Al -shabaab keessatti dubartoonni yeroo heddu gahee aadaa kan akka loltootaaf haadha warraa ta'uu fi mana keessa hojjachuu bahu. Yeroo tokko tokkoos, akka garboota quunnamtii saalaatti tajaajlu.
Kana malees miseensoota haaraa arkisuuf ni hojjatu. Qorannoon Keeniyaa keessatti gaggeefamee tokko akka mul'isetti, dubartoonni kanneen carraa hojii, gargaarsa maallaqaa fi tajaajila gorsaa akka isaaniif kannan waadaa galaniin gowwonfaman.
Fakkeenyaaf, Hidaya (maqaa dhugaa mit) hodhituun uffataa, maamila ishee hojii ishee kana caalaa akka bal'iftuuf itti himteen filatamte. Akka naannoo daangaa deemtuuf erga gowwoomfamteen booda gara Somaaliyaatti dabarfamte.
Dubartoonni erga hiriira bahanii booda alshabaab eegaa jiru
IS keessatti ammoo, keessumatu dubartoonni karaa intarneetiitiin gareewwan amantaa hundeessuun gahee si'omaa bahatu.
Dhimma Shaamimaa Begum ilaallatuun, filatamuun ishee holola IS tiif mo'icha ture. Isheen garuu Siiriyaa keessatti abbaa manaa fi ijoollee ishee kunuunsuu bira darbuun omaa akka hin hojjatiin himti.
Dubartoonni IS keessaas daangaa hanga ta'eetiin akka hakiimootaa fi hojjattoota kunuunsa fayyaatti akka hojjataniif hayyamamaaf. Gareen kunis humna poolisii dubartootaa guutuu qaba.
Dhiheenya kana keessa ammoo, akka garee Iraaqii fi Siriiyaa keessaa daangaa isaa dhabeetti, dubartoota gaheewwan duraa kannuuf akka yaadu hima gazexaa isaa al-Naba jedhamuutti fayyadamuun waamicha dubartoota jihaadii taasiseen.
Saaly-Anne Jonesbara 2017'tti IS filatamtee gara Siriyaa imalte achittis akka waan drooniin ajjeefamtee jirti seete.
Somaaliyaa bakka al-shaabaab motummaa isilaamaa shariyaan bulu hundeessuuf yaaluu keessatti, dubartonni kanneen adda durummaan ajjeechaa raawwatan keessaayi.
Xinxala haleellaa alshaabaab bara 2007 fi 2016 jidduutti taasifame irratti gaggeefameen %5 dubartootaan kan raawwatameedha.
Haalli kunis akkasuma biyyoota afriikaa kan biraa kan akka Naayijeeriyaa garee milishaa Bokoo Haraam dubartoota akka bombii dhoosaniif itti fayyadamu.
Dubartoonni maaliif gareewwan jihaadistiitti makamu?
Dhimmooti dubartoonni akka gareewwan kanneenitti makamaniif isaan kakaasan hedduutu jira.
Fakkeenyaaf malawwan akka dubartoonni yaada gahee aadaa dubartootaa bahan taasisuu isa tokkoodha.
Haaluma kanaanis, qorannoon tokko akka mul'iseetti, al-shabaab shamarran musilimaa barnoonni sadarkaa olaanaa gaa'ila isaanii akka tursiisu sodaatan filata jedha.
Haleellaa Naayiroobiin lubbuun namaa darbe
''Nama na fudhee na eeguutti yoon heerume, maafan qorannoofi barnootaan of dhiphisa?'', jechuun barattuun Yunivarstii Naayiroobii tokko qorattootaaf yaada kennite.
Kan hafan ammoo waadaa hojii, maallaqaa fi carraawwan kan biraatiin hawwataman.
Haa ta'u malee, waan akka gareewwan kaneennitti makamuuf madda ta'e adda baasuun rakkisaadha. Dubartoonni nuti dubbifne hedduunis fedhii isaatiin ala akka filataman himu.
Akka Shaamimaa Begum ammoo, sochiiwwan gariichaa keessatti si'ominaan hin hirmaanne ykn fedhii isaaniin ala hirmaatan. Muraasni isaanis akka saaxilamtoota ta'an dubbatu.
Loltoota gara qee'eetti deebii'an duraaatiif adeemsiwwan bayyanachisuu hedduutu jira. Muraasa isaanii qofaatu dubartoota irratti xiyyeefata.
Qaamoleen imaamata baasan fi tajaajilli nageenyaa yoo tarsiimoo ittisaa, bayyanachisuu fi walhidhuu hojjataniitti dhimmoota dubartoonni akka gareewwan mankaraaressummaatti akka makaman taasisaniif xiyyeefannaa addaa kennu qabaatu.
Fakkeenyaaf, hedduunsaanii ijoollee abbaa warraa loltuu du'ee ykn kan badee guddisu. Kanaafuu hedduunsaanii tajaajila gorsaa dirqiin gudeedamuu fi miidhaa saal qunnamtii barbaadu.
Kunis balaa isaan keessa jiran to'achuun hawaasa isaanii gargaaruun alalttis, dubartoonni kuun akka gareewwan makaraartootaatti hinmakamneef ni gargaara.
Haleellaa Naayroobii: Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhateera